Thwebula Dr.Web 10.1.2 – Android – Vessoft
Dr.Web – a software ukunikeza ukuvikelwa uhlelo kusukela izinsongo ehlukahlukene. Isofthiwe livikela idivayisi kusukela malware, spam, e-mail noma inethiwekhi worms, sites ngokuqukethwe esiyingozi njll Dr.Web ikuvumela ukuba aqhube scan fast, full kanye kukhethwa uhlelo for phambi izinsongo ezahlukene. Isofthiwe kwenza ukuba adale futhi ngezifiso amaphrofayli ukuvimba namakholi angenayo imiyalezo izidingo umsebenzisi. Dr.Web ubonisa ulwazi mayelana uxhumano asebenzayo inthanethi kanye namanani of traffic asetshenziswa by izicelo uhlelo. Dr.Web iqukethe indlela ekhethekile esetshenziswa uma ukweba of device ukuthola futhi uvimbele izici zefoni.
Blocks izingcingo ezingenayo kanye nemiyalezo
Ukuvikelwa web-sites ngokuqukethwe esiyingozi
Amahlelo ahlukahlukeneko scan
English, Español, Deutsch, 中文... Avast 5.8.1
Zokuham video Ithuluzi ukubuka futhi isakaze isiqophi ukusakaza. Isofthiwe kwenza ukugunyaza futhi sokubhala imibono noma adale okhethweni.